Alarobia 05 Aogositra 2020 – FJKM
Nisy zavatra roa niady tao an-tsain’ ny mpanjaka teto :
Andaniny , ny fahitany ny finoana sy fatokian’iDaniela an’Andriamanitra izay ivavahany sy inoany fa afaka mamaha ny olana rehetra manjo azy .
Ankilany , ny liona : fantany loatra izay hataon’ny liona raha mahita olona . Tena sarin’ny fahafatesana ny liona . Teo anatrehan’ny fandatsahana an’I Daniela tao an-davaky ny liona àry dia niteny izy hoe : “ “ny Andriamanitrao anie hamonjy anao” , nefa niteny izy hoe : “moa mahavonjy anao tamin’ny liona va ny Andriamanitrao?” .
Fihetsika sy fitenin’ny olona tsy mino an’Andriamanitra izany. Tsy mahagaga moa izany satria olona hafa firenena iDariosa fa tsy mpino an’ Andriamanitra velively . Manoloana izany , moa mahavita miaro ny olony tokoa ve Andriamanitra manoloana ny zava-doza manjo azy ireo ? Eny , miaro sy mamonjy ny olona tokoa Izy ho an’izay :
Marina eo anatrehan’Andiamanitra sy ny olona
Na ahoana na ahoana herin’ny liona (ny fahafatesana ) hivonona hamono ny olona dia ambara eto fa manana vahaolana amin’izany Andriamanitra ho an’ny olony izay marina eo anatrehany sy marina eo anatrehan’ny olona .
Tsy mandeha ho azy anefa izany fananan’ny olona fahamarinana eo anatrehan’Andriamanitra izany raha tsy mifandray tanteraka Aminy aloha ny olona . Izany hoe : mino , matahotra , manompo , mivavaka , mahatoky Azy amin’ny fiainany sy ny ataony rehetra .
Azon’ny kristiana atao ve ny miaina amin’ny fahamarinana sy mino an’Andriamanitra tanteraka?